Xalaal Safarka Melbourne Muslim & Tilmaamaha Safarka Xalaasha
Safarka Xalaal ee Australia
Safarka Xalaal ee Melbourne
Xaaladda Covid-19 ee Australia
Marka loo eego tirakoobkii la sameeyay sanadkii 2016, dadka muslimiinta waxay gaarayaan 210,000 oo qof halka 3.23% ay yihiin muslimiinta Victoria.
4.2% dadka ku nool magaalada Greater Melbourne waa muslimiin. Dad badan oo muslimiin ah oo halkaas ku nool waa Bosnia iyo Turki. Muslimiinta Melbourne ee Australiyaanka ah waxay ugu horeyn ku nool yihiin xaafadaha woqooyi ee ku hareeraysan Broadmeadows, (inta badan Turkiga), Coburg, Brunswick iyo Epping (badanaa Lubnaan) iyo in yar oo ka mid ah hareeraha koonfureed sida Noble Park iyo Dandenong (inta badan Bosnian).
Dad aad u tiro yar oo muslimiin ah ayaa ku nool dhulka miyiga ah marka laga reebo bulshada tirada badan ee Turkiga iyo Albania ee ku nool Shepparton, oo leh masaajidka ugu faca weyn Victoria.
Mirrabooka iyo Beechboro waxay ka kooban yihiin bulshooyinka ugu badan ee Bosnia. Masaajidka ugu faca weyn magaalada Perth waa masaajidka Perth ee kuyaala William Street ee Northbridge. Waxay soo martay dayactir badan inkasta oo qaybtii asalka ahayd ay wali taallo. Masaajidda kale ee ku yaal magaalada Perth waxay ku yaalliin Rivervale, Mirrabooka, Beechboro iyo Hepburn.
Waxa kale oo jira bulshooyin Muslimiin ah oo ka kala yimid Turkiga, qaaradaha Hindiya (Pakistan, Hindiya iyo Bangaladesh) iyo Koonfur-Bari Aasiya, oo ku kala yaal Sydney iyo Melbourne, bulshooyinka Turkiga ee ku xeeran Auburn, New South Wales iyo Meadow Heights iyo Roxburgh Park iyo beelaha Koonfurta Aasiya agagaarka Parramatta. Muslimiinta Indooniisiya, ayaa si aad ah ugu baahsan Darwin.
Melbourne waa magaalada labaad ee ugu weyn iyo caasimada dhaqanka ee Australia, oo leh qaab dhismeedka xilligii Victoria, dukaamaysi ballaadhan, matxafyo, qolalka, tiyaatarada, iyo jardiinooyin waaweyn iyo beero. Qaar badan oo ka mid ah 4 milyan oo qof oo deggan ayaa isugu jira dhaqamo kala duwan iyo kuwo waalan oo isboorti ah. Magaalada caasimada u ah koonfurta-bari ee Victoria, kuna taal madaxa Port Phillip Bay, Melbourne waa soo jiidashada soo-galootiga ka kala imanaya adduunka oo dhan, waxayna si joogto ah ugu jirtaa mid ka mid ah magaalooyinka adduunka ugu nolosha fiican.
Soo-booqdayaashu waxay u yimaadaan inay ka qaybgalaan munaasabadaha waaweyn ee isboortiga, iyo inay u adeegsadaan saldhig ay uga baaraan-degaan meelaha u dhow sida Grampians National Park, the Great Ocean Road, iyo Phillip Island iyo paraguin parade. Dad badan oo soo booqda Boqortooyada Midowday ayaa u yimaada booqashooyinka goobaha lagu duubayo ee filimka saabuunta Deriskooda.
Wabiga Yarra iyo bartamaha Melbourne skyline
Degitaankii Ingiriisku ee Melbourne wuxuu bilaabmay 1835 markii degganayaashii ka socday Tasmania ay "iibsadeen" dhul ku yaal Port Phillip Bay iyo Yarra River oo ka soo jeeda qabiilooyinka Aborijiniska ee deegaanka. Waddooyinka bartamaha Melbourne waxaa si taxaddar leh loo dhigay 1837, iyadoo waddooyinka qaarna 30 mitir ballaadhan yihiin. Dejinta waxaa loogu magac daray "Melbourne" William Lamb, 2nd Viscount Melbourne, Raiisel Wasaaraha Ingiriiska ee waqtigaas. Lieutenant-governor-kii ugu horreeyay ee Ingiriis ah, Charles La Trobe, wuxuu yimid 1839 - Cottage-kiisi weli wuu taagan yahay waana lagu booqan karaa goobta loo yaqaan 'Kings Domain'. Sannadku markuu ahaa 1851 wuxuu astaan ​​u ahaa Melbourne - gumeysigii Victoria wuxuu ka go'ay New South Wales waxyar ka dib, dahab ayaa laga helay Victoria, taasoo dhalisay orod badan oo dahab ah. Dhinacyada taariikhda degdegga ah ee dahabka waxaa lagu arki karaa Matxafka Dahabka ee Dahabka, oo ku yaal Dhismaha Khasnada ee la dhisay 1858. Dahabku wuxuu ahaa kaabayaasha dhowr iyo toban sano oo barwaaqo soconayay illaa dhammaadkii 1880-meeyadii iyo tusaalooyinka qaab-dhismeedka xilligii Fiktooriya ee la dhisay. markan wali taagan. Sanadkii 1888, kororka hantida ayaa burburay Victoria waxay la kulantay niyad jab 1890s. Intii dahabka iyo dhismahu socdeen, Melbourne waxay ku guuleysatay inay sii haysato jardiinooyinkeeda waaweyn iyo jardiinooyin waaweyn oo ilaa maanta jira.
Sanadkii 1901, gumeystihii Ingriiska ee Australia wuxuu noqday federaal iskiis isu maamula Melbourne waxay noqotay caasimad kumeel gaar ah ee Australia, iyadoo baarlamaanka Federaalka ku shiray aqalka baarlamaanka ee Victoria ilaa 1927 markaas oo la aasaasay caasimada cusub ee Federaalka ee Canberra. Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib, Melbourne si dhakhso leh ayey u kortay, iyada oo badiyaa dadkeeda Anglo-Celtic ay kordhisay soogalootiga ka imanaya Yurub, gaar ahaan Griiga iyo Talyaaniga. Maanta Melbourne waxay leedahay dadka ugu badan ee Giriigga ah (in ka badan 800,000) magaalo kasta oo ka baxsan Griiga iyo dadka ugu badan ee Talyaaniga (in ka badan 230,000) ee magaalo kasta oo ka baxsan Talyaaniga. Shacabkii muhiimka ahaa ee yahuudda kahor dagaalka ayaa sidoo kale la xoojiyay dagaalka kadib. Laga soo bilaabo bartamihii 1970-naadkii, soogalooti badan ayaa ka yimid Koonfur-bari Aasiya, gaar ahaan Vietnam iyo Kambodiya. Melbourne waxaa ku noolaa dad Shiine ah tan iyo markii uu socday dahabiga 1850-meeyadii. Magaalada Chinatown way jirtay waagaas laakiin dadka Shiinaha iyo kuwa kale ee bariga Aasiya ku nool waxaa sidoo kale soo kordhiyay socdaalka.
Dhismayaal cusub oo heer sare ah ayaa badalay qaar badan oo ka mid ah dhismooyinkii hore ee xiisaha lahaa ee Melbourne ee dhismahii kobaca ee 1970s iyo 80s. Dadka reer Melbourni waxay si daahsoon u aqoonsadeen luminta hidaha dhismeedkooda iyo talaabooyin loo qaaday si loo ilaaliyo wixii haray. Dhismaha Kaniisadda weyn ee loo yaqaan 'Crown Casino' (oo si kooban u ah casino ugu weyn adduunka) 1990-yadii waxay ka careysiisay qaar ka mid ah reer Melbourni markii ay soo bandhigtay dhaqan khamaar. Horumarinta Melbourne waxay sii socotaa 2000s iyada oo laga furay Matxafka Melbourne, Fagaaraha Federation iyo agagaarka Docklands.
Dhaqanka & Dhaqanka Melbourne
Jardiinooyinka Grimwade, heerka dhulka ee NGV
Melbourne waxaa badanaa loogu yeeraa caasimada dhaqanka ee Australia, iyada oo leh qolalka farshaxanka badan, xafladaha filimada, orchestras, heesaha heesaha iyo heesaha, muusikada tooska ah ee firfircoon, iyo cunno adag, khamri iyo dhaqan kafee ah. Dadka ku nool Melbourne waxay u badan yihiin inay labbistaan ​​wax ka badan kuwii Sydney, qayb ahaanna waxay ugu wacan tahay cimilada oo aad u qabow. Baararka iyo naadiyada badan waxay leeyihiin sharciyo adag oo dharka, sida ubaahan silsilado iyo kabo labis ragga.
Dhacdooyinka gaarka ah ee ay tahay in la xuso waxaa ka mid ah Bandhigga Caalamiga ah ee Filimka Melbourne ee Ogosto, Bandhigga Caalamiga ee Farshaxanka ee Oktoobar, iyo Bandhigga Majaajillada Melbourne ee Abriil. Waxaa sidoo kale jira riwaayado iyo bandhigyo badan sanadka oo dhan. Matxafka Melbourne ka sokow, waxaa jira matxafyo gaar ah oo loogu talagalay maadooyinka sida sayniska, socdaalka, taariikhda Shiinaha, taariikhda Yuhuudda, isboortiga, tartanka, filimka iyo muuqaalka dhaqaaqa, jidadka tareenka, booliska, dab damiska iyo bangiyada.
Melbournians waa kuwa jecel ciyaaraha waxayna si gaar ah u jecel yihiin Sharciyada Australiyaanka ah ee Kubadda Cagta, isboorti laga sameeyay Melbourne. Xaqiiqdii Horyaalka Kubadda Cagta ee Australia (AFL) maahan wax isboorti ahaan diin ahaan Melbourne, iyadoo 9 ka mid ah 10-kii koox ee Fiktooriya ka dhisan ay deggan yihiin Melbourne. Tilmaama ahaan, dhamaan tartamada qaran waxay kaliya leeyihiin 18 koox, taasoo la micno ah kala bar horyaalku inuu ku saleysan yahay Melbourne oo keliya. AFL waxay ku egtahay AFL Grand Final guga, oo sanad walba lagu ciyaaro garoonka Criket-ka ee Melbourne. Tartanka farduhu waa dareen kale, gobolka intiisa badanna waxay leeyihiin fasax guud Talaadada ugu horeysa Nofeembar ee loogu talagalay tartanka Koobka Melbourne, mid ka mid ah tartamada caanka ah ee adduunka ee faraska. Cricket waa cayaaraha xagaaga ee weyn iyo Melbourne Cricket Ground ('' MCG ') waa mid ka mid ah sababaha adduunka hormuudka u ah. The Matxafka Ciyaaraha Qaranka (NSM) (oo ay ku jiraan Matxafka Racing) Matxafka kaliya ee isboortiga badan ee Australiya u gaarka ah ayaa sidoo kale ku yaal MCG.
Bil kasta Janaayo, Melbourne waxay martigelisaa tennis-ka 'Australian Open, oo ka mid ah afarta horyaal ee Grand Slam ee adduunka. Bishii Maarso, Melbourne waxay martigelisaa tartankii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedka 'Formula One', Formula One Grand Prix. Tartanka waxaa lagu qabtaa Albert Park ee Koonfurta Melbourne. Laba kooxood oo xirfadleyaal ah Kubbadda Cagta ayaa saldhigoodu yahay Melbourne, Melbourne Victory iyo Melbourne City FC; labada koox ayaa hada wadaaga garoonka cusub ee Melbourne Rectangular Stadium, oo ganacsi ahaan loo yaqaan AAMI Park oo sidoo kale ka ciyaara Etihad Stadium. Magaalada sidoo kale waxay ku faantaa hal koox oo xirfadleyaal ah koodh kasta oo rugby ah, oo labaduba sidoo kale ku ciyaaraan AAMI Park. Duufaanta Melbourne ayaa ciyaareysa horyaal rugby ah oo ka tirsan National Rugby League, iyadoo kooxaha Australia oo dhan lagu daray hal New Zealand ah. Falaagada Melbourne waxay ku ciyaaraan midowga rugby-ga Super Rugby, oo ka kooban afar koox oo kale oo Australiyaanka ah iyo shan dhinac oo kala ah New Zealand iyo South Africa. Melbourne waa caasimad isboorti oo aan la weydiinin Australiya iyadoo leh fagaaraha ugu waaweyn iyo laba ka mid ah maamulada isboorti ee waaweyn oo saldhig u ah howlgalkooda Melbourne: Cricket Australia waa dhagax tuur ka socda MCG, ciyaaraha AFL waxaa lagu ciyaaraa labada MCG iyo Etihad Stadium.
Cimilada magaalada waxay leedahay caan ku ah isbeddelkeeda, oo badanaa loogu yeero "afar xilli maalintii". Cimiladeeda waxaa lagu sifeyn karaa guud ahaan sida dabacsan, Kulayl diiran iyo jiilaal qabow. Xilliga kuleylaha ee Diseembar ilaa Febraayo, heerkulku wuxuu dul wareegayaa qiyaastii 26-30 ° C (79-86 ° F), laakiin maahan wax iska caadi ah in magaalada ay ka barareyso kuleylka ka sarreeya 40 ° C (104 ° F). Qoyaanku marar dhif ah waa arrin, oo leh habeeno dhexaad ah oo deggan illaa 16 ° C (61 ° F). Qiyaastii 600 mm oo roob ah sanadkii, Melbourne waxay heshaa kala bar inta ugu badan Sydney. Oktoobar caadi ahaan waa bisha ugu roobka badan.
Jiilaalka (Juun – Ogosto) badanaa waa qabow leh iskudhaf ah cimilo qorax leh iyo xaalado qabow & qoyan. Heerkulka xilliga qaboobaha wuxuu u dhexeyn karaa hoos-u-dhac qabow habeenki ugu hooseeya illaa 2 ° C (36 ° F) illaa meelaha sare ee maalintii oo sarreeya ilaa 19 ° C (66 ° F) mararka qaarkood. Baraf khafiif ah ayaa laga diiwaan geliyay Melbourne iyo hareeraheeda bilaha jiilaalka dhowr jeer oo keliya qarnigii la soo dhaafay, in kasta oo buuraha bariga magaalada si kastaba ha ahaatee ay sida caadiga ah arkaan qabow baraf ah ama laba jiilaal kasta. Waa inaad tixgelisaa booqashada Melbourne xilliga dayrta iyo guga - heerkulka xilliyadaas badanaa waa mid aad u wanaagsan, adigoon u adkeysan karin dhererka maalinlaha badanaa 20s ° C (70s ° F).
Cimiladaas duurjoogta ah oo aan la saadaalin karin, way adkaan kartaa go'aan ka gaarista waxa la xidho marka la qorsheynayo maalin ka bixida Melbourne. Tilmaam guud waa in la xidho lakabyo dhar ah, oo la saari karo ama la xidhan karo markay maalinti sii socoto.
Magaalada waxaa ka shaqeeya saddex garoon diyaaradeed, Madaarka Melbourne, oo leh duulimaadyo caalami ah iyo kuwo gudaha ah, iyo garoomada diyaaradaha yaryar oo u badan kuwa gudaha Madaarka Essendon iyo Madaarka Avalon.
Skybus oo ka duulaya gegada diyaaradaha ee Melbourne illaa Saldhigga 'Southern Cross Station'
Madaarka Melbourne, sidoo kale loo yaqaan Tullamarine Airport, waa 22 km waqooyi-galbeed magaalada Xarunta ee gobolka Hume. Waxaa jira duulimaadyo joogto ah oo ka yimaada dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Australia iyo New Zealand. Waxaa jira duulimaadyo toos ah oo ka imanaya xarumo badan oo Aasiya ku yaal, oo xiriir la leh Yurub, iyo duulimaadyo toos ah oo ka yimaada Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika iyo Yurub.
Gegada diyaaradaha Avalon () waa garoon diyaaradeed oo inta badan laga isticmaalo oo 55 km koonfur-galbeed ka xiga Melbourne oo ku taal magaalada Lara, una dhow Geelong. In kasta oo ay aad uga fogtahay garoonka diyaaradaha Melbourne, haddana qiimaha laga raaco Avalon mararka qaarkood aad ayuu uga jaban yahay. Saldhigyada guud ahaan waa kuwo aad ufudud, oo leh kaliya ATM, miisaska kirada baabuurta iyo gawaarida xamuulka. Tas-hiilaadka kale waxaa ka mid ah maqaaxi laga cunteeyo, bar iyo qolka arcade ee fiidiyaha. Waxaa jira duulimaadyo dhowr ah oo ka baxa iyo kuwa ka baxa Avalon maalin kasta, iyada oo in badan oo gudaha ah ay maamusho diyaarad jaban Jetstar (oo iyaduna u duusha garoonka diyaaradaha Melbourne) iyo duulimaadka AirAsiaX ee Kuala Lumpur.
SkyBus waxay ka hawlgashaa baska tareenka ee loo yaqaan 'Southern Cross Station' ee ku yaal magaalada Melbourne's City Center iyada oo loo sii maro duleedka galbeed ee Werribee, iyadoo lala kulmo duulimaad kasta oo tagaya ama tagaya. Kala iibsiga waxay ku kacayaan $ 22 hal dhinac oo ah qof weyn, iyo $ 10 oo loogu talagalay cunugga (4-14 sano). Marka laga reebo tababaraha, ma jiro gaadiid dadweyne; Saldhigga Lara wuxuu 8 km u jiraa Terminalka, taasoo la micno ah inuu baaskiil ku raaci karo wadada garoonka / ka soo noqoshada garoonka diyaaradaha ama uu ku qaban karo taksi, kaasoo ku kacaya ilaa $ 15 saldhigga. Taksi u socda magaalada oo ka baxa garoonka diyaaradaha wuxuu ku kacayaa $ 100 $.
Waqtiga wadista laga bilaabo Avalon Airport ilaa Melbourne's City Center waa qiyaastii 45 daqiiqo oo xaalado taraafiko oo wanaagsan ah. Gegada diyaaradaha Avalon sidoo kale waa ku haboon tahay in la gaaro Geelong u dhow iyo Wadada Weyn ee Weyn.
Saldhigga Koonfurta Cross
Saldhigga 'Southern Cross Station' waa xarunta tareenka ee magaalada Melbourne ee socdaalka gobollada iyo isku-xidhka. Waxay ku taal dhinaca galbeed ee Xarunta Magaalada, oo leh isu-socodka gaadiidka dadweynaha oo wanaagsan magaalada inteeda kale.
V / Line. Khadka tareenka ee gobolka Victoria, oo leh adeegyo guud ahaan gobolka laga bilaabo Geelong, Bendigo, Ballarat, Bairnsdale iyo meelo kale. V / Line sidoo kale waxay ka shaqeysaa qaar ka mid ah adeegyada gobolada, oo ay ku jiraan tareenka aada Albury-Wodonga, iyo isku darka adeegyada tareenka / tababarka ee Adelaide iyo Canberra.
NSW Tareen. Adeeggan tareenka ee u dhexeeya Sydney iyo Melbourne wuxuu baxayaa laba jeer subaxdii iyo fiidkii. Safarku wuxuu qaadanayaa wax ka yar 11 saacadood, waana inaad horay u sii qabsataa.
Dhulka. Adeeggan tareenka ee u dhexeeya Adelaide iyo Melbourne wuxuu qaadanayaa wax ka yar 11 saacadood. Socdaalku wuxuu u baxayaa laba jeer usbuucii jiho kasta.
Laga soo bilaabo Sydney, wadada ugu dhakhsaha badan ee loo maro Melbourne waa Hume Highway, oo qaadata 10 saacadood oo wadis ah iyada oo aan joogsi lahayn. Wadadani waxay ku dhowdahay dhammaan laba-waddo-weyn (waddada weyn). Waddada weyn ee loo yaqaan 'Princes Highway' (Waddada Qaranka 1) waxay aadaa dhinaca xeebta waana dad ku yar. Waxay qaadataa waqti ka dheer xadka xawaaraha ka hooseeya, buuraha iyo foorarka, iyo fursado yar oo lagu soo maro. Ka eeg Sydney ilaa Melbourne baabuur wixii macluumaad dheeraad ah.
Adelaide waxyar ayey uga dhowdahay Sydney waxaana lagu gaari karaa 9 saacadood. Wadada xeebta waa muuqaal laakiin gaabis ah.
Safar toos ah oo ka yimaada Brisbane wuxuu qaadanayaa 21 saacadood oo wadista ah wuxuuna kugu sii qaadanayaa dhinaca berriga wadada weyn ee Newell Highway. Tani waxay ka dhigaysaa beddelka wadada xeebta ee Brisbane-Sydney-Melbourne.
Adeegyada basaska ee ka taga Melbourne ee ka baxsan gobolka waxaa bixiya Firefly Express iyo Greyhound.
Adeegyada baska ee Victoria gudaheeda waxaa ka shaqeeya V / Line, waxayna ka shaqeeyaan magaalooyinka waaweyn iyo kuwa yar yar ee Fiktooriya.
Celebrity Solstice oo ku taal Port Melbourne
The Ruuxa Tasmania doonta rakaabka / doonta ayaa habeen walba u socota Melbourne iyadoo ka amba baxeysa Devonport, Tasmania. Safarka 10-ka saacadood ah wuxuu baxayaa 7:30 PM, wuxuuna imaanayaa 6AM, iyada oo maalin dheeri ah lagu safrayo inta lagu jiro xilliyada ugu sarreysa oo ay ku jiraan xagaaga.
Qiimaha tikidhadu waxay kuxiranyihiin waqtiga sanadka iyo hoygaaga jiifka. Kursi (sariir la'aan) waa ka ugu raqiisan, laga bilaabo (xilliyada aan caadiga ahayn) laga bilaabo $ 108 ee dadka waaweyn iyo $ 82 ee carruurta. Kursigu waa mid aan raaxo lahayn, oo u dhigma kursi shineemo. Qollada leh sariiraha jiifka ah waxay ka bilowdaan $ 187 dad waaweyn, $ 97 carruur ah. Qiimaha xilli ciyaareedka ugu sarreeya ayaa qiyaastii ah 25% ka sarreeya. Baabuurta ayaa ku kacaya $ 59 sanadka oo dhan.
Melbourne sidoo kale waxaa u adeega maraakiib badan oo caalami ah sanadka oo dhan, gaar ahaan xilliyada safarka xagaaga.
Dhammaan maraakiibta rakaabka ah ee u adeegaya Melbourne waxay yimaadaan oo ka baxaan Saldhigga Pier ee Port Melbourne, oo qiyaastii 5 km u jira Xarunta Magaalada. Jidka tareenka 109 (dhanka Box Hill) wuxuu si joogto ah uga tagaa saldhigii hore ee tareenka oo marayay waddada Pier, isagoo u safraya bartamaha Melbourne kuna teedsan Collins St. Waxaad ka iibsan kartaa mykis mashiinka taraamka ama miiska booqdaha xilliga ugu sarreeya .
Flagstaff Station, marka laga reebo Melbourne's City Loop.
Melbourne waxay leedahay aag weyn oo magaalo weyn ah, laakiin inta badan meelaha xiisaha leh waxay ku yaalliin Bartamaha Magaalada, inta badanna waxaa lagu gaari karaa 20 daqiiqo gudahood tareenka ama taraamka. Xarunta Magaalada Melbourne waxaa loo dejiyay nidaam isku xidhnaan oo habsami leh, oo la mid ah nidaamka shabakadda Manhattan, taasoo la micno ah in marin -u -socodka Xarunta Magaalada ay fududahay.
Melbourne waxay leedahay nidaam gaadiid dadweyne oo la isku hallayn karo oo ka kooban taraamyada, tareenada iyo basaska: taraamyada iyo tareenadu waxay ka baxaan faras magaalaha ilaa xaafadaha, halka basasku inta badan daboolaan inta kale. Waxaa jira xiriirro dhammaan soojiidashada waaweyn ee magaalada, waana wax fudud in la iska socdo baabuur la'aan. Shabakadda inteeda badan waa kursi curyaan iyo gaari-raac oo la heli karo, marka laga reebo shabakadda taraamka, oo inta badan ku shaqeysa baabuur duug ah, oo talaabo-gelis ah. Tareenka, taraamka iyo adeegyada waaweyn ee basaska guud ahaan waxay shaqeeyaan inta u dhaxaysa 5subaxnimo ilaa saqda dhexe Isniinta -Sabtida iyo wixii ka dambeeya 8 AM Axadda. Habeennada Jimcaha iyo Sabtida, tareenka habeenkii, taraamka iyo basaska ayaa ka shaqeeya shabakad habeen oo kooban.
Gaadiidka Dadweynaha Victoria iskuduwaha gaadiidka dadweynaha wuxuuna bixiyaa jadwallo, khariidado, macluumaadka khalkhalka iyo qorsheeye safar oo aad u faa'iido badan. Barnaamijyada mobilada waxaa loo heli karaa aaladaha iOS iyo Android; Khariidadaha Google ayaa sidoo kale isku daraya macluumaadka tareenka, taraamka iyo macluumaadka basaska.
Faylka: Kaarka Myki.JPG
Akhriste myki oo bas saaran
Myki waa kaarka casriga ah ee dib loo buuxin karo ee loo isticmaalo dhamaan safarada tareenada, taraamyada iyo basaska. Kaararka Myki waa laga iibsan karaa oo laga soo dejin karaa saldhigyada tareenka ee ka shaqeeya, mashiinnada saldhigyada, istaamyada waaweyn ee taraamka iyo garoonka diyaaradaha, khadka tooska ah, iyo dukaamada tafaariiqda ee kala duwan sida wargeysyada iyo dhammaan 7-Eleven dukaanno. Adiga ma yeeli karno soo iibso ama dib ugu cusbooneysii taraamyada, tareennada ama basaska.
Kaararka joogtada ah ee dadka waaweyn waxay ku kacayaan $ 6, kaararka dhimista / ka yar 16-ka sano waa $ 3. Tanaasulku wuxuu khuseeyaa oo keliya Australiyaanka leh kaarka dhimista ku habboon. Kaadhku wuxuu ku yimaadaa iyada oo aan lahayn deyn horay loo soo rogay khidmadana aan la soo celin karin. Xirmo myki Explorer ah ($ 15 / 7.50 cunug qaangaar ah), oo lagu soo rakibo $ 9 / 4.50 oo deyn ah (oo ku filan maalin dhan oo safar ah) iyo rasiidh rasiidh raqiis ah, ayaa laga iibsan karaa Xarunta Booqdayaasha ee Melbourne, SkyBus boosteejooyinka garoonka diyaaradaha iyo Saldhigga Koonfureed ee Isgoyska, Hub iyo PTV Hubs.
Si aad u isticmaasho myki, taabo adiga oo ku haya kaarka akhristaha ka hor intaadan u safrin saldhigga tareenka, ama saaran baska/taraamka, oo sug dhawaaqa. Taabo marka aad ka baxayso saldhigga tareenka ama baska, in kastoo taabashada taraamka ay tahay mid ikhtiyaari ah. Metropolitan Melbourne waxay leedahay laba aag: Aagga 1 oo daboolaya magaalada oo dhan, iyo Aagga 2 oo oggolaanaya qiimo jaban marka lagu safrayo xaafadaha dibadda. Lacagta lagu raaco (oo ay ku jirto wakhtiga safarka iyo aagga) waxaa si otomaatig ah loo xisaabiyaa oo laga gooyaa myki, sidaa darteed looma baahna in hore loo sii qorsheeyo kharashyada. Bartamaha magaalada, waxaa sidoo kale ku yaal a Aagga Daraamka Bilaashka ah halkaasoo aanu qofku uga baahnayn myki inuu safro isla markaana aanu taabanaynin haddii uu ku sii hadhayo aagga.
Qiimaha Myki (illaa 1 Janaayo 2020) Dadka Waaweyn
Tanaasul / Cunug
2 saac $ 4.4 $ 3.0 $ 2.2 $ 1.5
Daily $ 8.8 $ 6.0 $ 4.4 $ 3.0
Shuruucda iyo sharciyada ku xeeran gaadiidka dadweynaha waa kuwo adag. Kormeerayaasha tikidhadu waa wax caadi ah, ganaaxyaduna waxay ka bilowdaan $ 207 (laga yaabee hadda in kabadan) goobta denbiyada sida quursiga lacagta, cagaha saaraan kuraasta, cayda iyo cabitaanka aalkolada.
Shabakada tareenka waxaa ku shaqeeya Tareennada Metro ee Melbourne leh calaamado buluug ah. Qeyb-dhulka hoostiisa ah "Magaalada Loop" ayaa aasaas u ah shabakadda, iyadoo dhammaan khadadka kale ay u sii kala baxayaan hareeraha xaafadaha sida afhayeenka shaagagga. Khadadka waxaa loogu magacdaray saldhigga dhamaadka safka, dhammaantoodna waxay marayaan Saldhigga Flinders Street, oo ah xarunta tareenka ee hareeraha magaalada. Tareenada aada xaafadaha guud ahaan waxay ku shaqeeyaan 10-20 daqiiqadood oo isdabajoog ah, oo leh mowjado sare (laakiin ciriiri badan) waqtiyada ugu badan. La soco in tareenada qaar ay ka boodaan saldhigyada magaalada hareerahooda markay u socdaan ama u socdaan magaalada; si taxaddar leh u hubi shaashadaha macluumaadka si aad u hubiso.
Tareenka E-Class ee Wadada Bourke
Trams-ku waa muuqaal caan ku ah muuqaalka magaalooyinka Melbourne. Magaalada waxay leedahay shabakadda ugu ballaaran adduunka. Shabakada waxaa ku shaqeeya Taraamyada Yarra leh summad cagaaran. Inta badan khadadka taraamku waxay ka baxaan Xarunta Magaalada sida af -hayeenka. Magaalada dhexdeeda, waxay badanaa noqdaan dad ciriiri ah, lagamana yaabo inaad kursi hesho. Shabakadda waxaa ku shaqeeya isku-darka taraamyo cusub, dabaqyo hoose leh oo leh ogeysiisyo joogsi iyo qaabab duug ah oo talaabo-gelitaan ah. Joojinta magaalada gudaheeda guud ahaan waxay leedahay barxado, in kasta oo joogsiyada badankoodu ay u baahan yihiin in taraamka laga raaco dhinaca waddada; ka taxaddar joogsiyadaan oo raadso baabuur mashquulsan oo laga yaabo inay si sharci -darro ah u xawaaraan.
Yarra Trams 'macruufka rasmiga ah ee barnaamijka' iOS iyo Android ', tramTRACKER, wuxuu faa'iido badan u leeyahay la socoshada taraamyada waqtiga dhabta ah iyo la socoshada horumarka taraamka dushiisa. Inta badan jidadka taraamka waxay lahaan doonaan adeeg 8-daqiiqo ah 12-20 maalintii, iyadoo mowjaddo badan ay sarreeyaan inta ugu sarreysa, laakiin isweydaarsiyada hoose ee 30-XNUMX daqiiqo fiidkii.
Ku safrida dhammaan taraamyada ku yaal bartamaha magaalada waa lacag la'aan. Soohdinta Aagga Tramka Bilaashka ah waxaa lagu calaamadeeyay calaamado badan, laakiin xusuusnow inaad taabato haddii aad ka tagto FTZ. Tan waxaa dheer Circle City, taraam dalxiis oo lacag la’aan ah oo ku yaal Bartamaha Magaalada, kaas oo mara meelo badan oo waaweyn oo taraamyada taariikhiga ah.
Basasku waxay u adeegaan sidii isku xirka meelaha aan lahayn gaadiidka tareenka, inta badan waxay ku xirmaan Xarumaha wax iibsiga iyo saldhigyada tareenka. Waxaa astaan ​​u ah summada liinta iyo joogsiga, basaska badankoodu waa dabaq hoose iyo qaboojiye. Dhowr jid oo waaweyn (oo ay ku jiraan kuwa sida 200/207 ee woqooyiga gudihiisa, 900 ilaa Chadstone, 907 ilaa Doncaster, iwm) waxay ku shaqeeyaan 10-15 daqiiqadood oo isdaba joog ah, inkasta oo basaska badankood, ay lagama maarmaan tahay in la isticmaalo safarka qorsheeyaha ama jadwalka jadwalka, maaddaama adeeggu uu aad uga yar yahay tareenada iyo taraamyada.
Tareenka Wareegga Magaalada
Sida kor ku xusan, bilaashka ah Wareegga Wareegga Magaalada (Wadada 35) waxay ku socotaa hareeraha CBD, oo ay ku shaqeyso maroon-cagaaran ama taraam cagaaran. Faallada maqalka waxay bixisaa macluumaad ku saabsan soojiidashada la dhaafay. Taraamadan waxaa loogu talagalay martida waxayna siinayaan marin loo helo goobaha xiisaha u leh dalxiiska. Macluumaad dheeraad ah ayaa lagu bixiyaa hagaha Xarunta Magaalada.
The Shidaalka Dalxiiska Magaalada Melbourne waa ikhtiyaar kale oo sidoo kale ku fidsan meelaha loo dalxiis tago ee muhiimka ah oo ka baxsan Xarunta Magaalada, oo ay ku jiraan MCG, Lygon Street iyo Royal Botanic Gardens. Basasku waxay shaqeeyaan 30 daqiiqo oo u dhexeeya 9:30 AM iyo 4:30 PM maalin kasta. Wareegga oo dhammaystiran wuxuu qaataa 90 daqiiqo, oo leh faallo dusha saaran. Waxay ku kacaysaa $ 10 laba maalmood oo isku xigta, taas oo u oggolaanaysa booqdayaasha inay ku boodaan oo ka baxaan inta jeer ee ay rabaan muddadaas gudaheeda. Tigidhada waxaa laga iibsan karaa onlayn, Xarunta Booqashada Melbourne ama kaarka amaahda ama qadaadiicda mashiinnada tigidhada goob kasta oo joogsi.
Agagaarka gudaha Melbourne waxay leeyihiin shabakad wanaagsan oo wadooyin baaskiil ah heerarka wadamada ku hadla Ingiriisiga, iyo waliba dhul guud ahaan fidsan, taasoo ka dhigaysa awood-baaldelada habka ugu wanaagsan ee lagu qaado magaalada. Jidadka badankood waa “wadooyin la wadaago” oo sharciga waafaqsan, in kasta oo inta badan dadka isticmaala meelaha badankood ay yihiin baaskiillayda. Tan macnaheedu waxa weeye wadayaasha baaskiil wadayaashu waa inay filayaan inay jidka la wadaagaan dadka lugaynaya, eey-socodka, roobareyaasha, joggers, prams iyo saddex-baaskiil. Wadooyinka qaar waxay ka kooban yihiin qaybaha wadada (waddooyinka baaskiilka la calaamadeeyay). Waa sharci in baaskiil lagu maro waddooyinka oo keliya marka la kormeerayo carruurta baaskiilka wadata ama marka dariiqa loo calaamadeeyo ama loo calaamadeeyo inay u oggolaanayso baaskiillada. Koofiyadaha sharciga ayaa u baahan, si laydhadhkuna u socdaan marka habeenkii la raacayo.
Wadada Yarra River. Waxay ka socotaa afka wabiga caanka ah ee 'Yarra River' ee Melbourne, magaalada dhexdeeda iyo ka dib ilaa Westerfolds Park ee hareeraha magaalada.
Wadada Magaalada. Waxay ku wareegtaa wareegga xaafadaha Melbourne, xaafadda Docklands iyo magaalada. Waa hab fiican oo lagu arko jeexan nolol maalmeedka.
Wadada Bay. Socdaal wanaagsan oo ku teedsan Port Phillip Bay, oo ka socda Port Melbourne, oo maraya agagaarka xeebta St Kilda, oo soo dhaafaysa meelihii ugu weynaa ee lagu maydho ee Brighton, ilaa Carrum. Buntin ayaa ka hoos shaqeysa Buundada West Gate dhamaadka usbuuca iyo ciidaha iyadoo u oggolaanaysa bilowga Altona Meadows oo loo maro Waddada Williamstown, oo dhan, iyo ku biirista Bay Trail. Kama fuuli kartid buundada West Gate Bridge.
Wadada Maribyrnong. Laga bilaabo Southbank oo lagu dhammeeyo Brimbank Park oo ku taal galbeedka Melbourne, marinka wabiga Maribyrnong waa waddo 28-km ah oo fududaaneysa dhexdhexaad dhexdhexaad ah. Raadku wuxuu kugu dhaafayaa markabka Polly Woodside iyo marinka Docklands ilaa Footscray Road. Markaa waxaad raaci doontaa webiga Maribyrnong, adigoo sii maraya Flemington Racecourse ka hor intaadan ka gudbin wabiga una gudbin Pipemakers Park. Inta soo hartay wadada ayaa ku mari doonta dhulka baadiyaha ah iyo keydka wabiga iyo buundooyinka hoostooda ka hor intaadan ku dhameystirin Brimbank Park.
Baaskiillada si xor ah ayaa looga qaadi karaa tareennada, in kasta oo laga yaabo inaanay bannaanayn inta lagu jiro xilliga ugu sarreeya. Kaliya mootooyinka isku laabma ayaa loo ogol yahay taraamyada iyo basaska.
Wadaagista Baaskiilka Melbourne. Baaskiiladu waxay ku kacayaan $ 2.90 maalintii, ilaa intaad baaskiilka ku soo celinayso 30 daqiiqo kasta (ogow haddii aadan ku hubin baaskiilka 3 saacadood kirada waxay ku kici doontaa in ka badan $ 40). $ 5 koofiyadaha baaskiilka waxaa laga iibsan karaa qaar ka mid ah 7-Eleven dukaan oo ku yaal Bartamaha Magaalada waxaana lagu celin karaa $ 3 dukaan kasta oo iibiya. Haddii aad nasiib leedahay waxaad ka heli kartaa mid ku lifaaqan xagga hore ee baaskiilka.
Kireysi, Vault 14 Princes Walk (oo u dhow Federation Square, Federation Wharf, dhinaca woqooyi ee Yarra). 10 AM-5PM. $ 35 maalintii.
Freddys Baaskiil Dalxiis & Kiro, 32 Rebecca Walk (Batman Park oo ku taal wabiga Yarra una dhow Melbourne Aquarium). 9 AM-7PM. Kireysiga baaskiilka iyo kireysiyada. Sidoo kale waxay bixisaa safarro badan oo baaskiil haga oo loo maro xaafadaha Melbourne. $ 25 maalintii.
Hook jeedin calaamadda digniinta
Wadista baabuurka ee Xarunta Magaalada Melbourne guud ahaan waa wax aan la arki karin. Ciriirigu wuxuu u eg yahay mid xun, baarkinka waddada oo ay adag tahay in la helo, iyo dhigashada meelaha baabuurta la dhigto ee dabaqyada badan leh ayaa aad qaali u ah. Intaa waxaa dheer, waa inaad barataa sida loo fuliyo leexashada jillaab (hoos lagu sharraxay) sababtuna waa taraamyada tirada badan ee magaalada. Waxaa la yiri, wadista baabuurtu guud ahaan waa habka ugu wanaagsan ee loo maro agagaarka xaafadaha Melbourne, maaddaama shabakadda gaadiidka dadweynaha ay u muuqato mid aan la isku halleyn karin, aan badnayn oo si khafiif ah ugu faafta marka loo eego bartamaha magaalada, gaar ahaan xaafadaha dibadda. Haddii aad ka safraysid xaafadaha bannaanka ilaa magaalada, guud ahaan waxaa ugu wanaagsan inaad dhigato gaarigaaga saldhigga tareenka ee kuugu dhow oo aad tareen soo gasho. Mootooyinka iyo mootooyinka ayaa laga yaabaa inay si sharci ah u dhigtaan waddooyinka lugaha haddii aysan hor istaagin dadka lugeeya ama ka gudbaya.
Silsiladaha waaweyn ee kirada baabuurta si fiican ayaa loo matalaa waxaana ka mid ah Avis, Gorgortanka Baabuurta, Miisaaniyadda, Europcar, Hertz iyo Thrifty. Shirkadaha madaxa banaan ee kirada baabuurtu sidoo kale way badan yihiin waxayna ku bixin karaan qiimo wanaagsan lacag. Qaar badan oo ka mid ah shirkadaha kirada ah waxay ku yaalliin agagaarka Southbank ee Melbourne, sidaa darteed haddii aad ku dhowdahay ama ku hareeraysan tahay CBD, waa inay sahlanaato inaad hesho shirkadaha kireynta baabuurta ee matasha iyo kuwa madaxbanaan. Isbarbardhigga u dhexeeya shirkadaha kireysta baabuurta ee maxalliga ah sidoo kale waxaa lagu sameyn karaa VroomVroomVroom, Baabuurta Kirada Buddy ama Xulashada Gawaarida Gawaarida. Haddii aad raadineyso inaad masaafo dheer ku daboosho gaari, hubi in siyaasadaada kirada ay kujirto masaafad aan xadidneyn - dhaqaalaha ugu badan ee kirada baabuurta ee cabirkoodu sarreeyo waxaa kujira tan horeyba.
Bartamaha Magaalada, isgoysyo badan ayaa kaa doonaya inaad ku sameyso sumcadda xun jillaab jeedin si aad midig ugu leexato dariiqyada taraamka oo hoos maraya waddada. Raac calaamadaha: u gudub haadka bidix oo u soco sida ugu fog ee suurtogalka ah, sug oo marka calaamadda taraafikada ee waddada aad isu rogeyso ay noqoto cagaar, leexo.
Melbourne waxaa ku yaal laba jid-weyneyaal waaweyn oo waaweyn, oo labaduba aan lahayn lambar-gacmeedyo lacag-bixineed oo u baahan tikidhada dharaar lagu sii iibsado ka hor ama illaa saddex maalmood ka dib safarka khadka tooska ah ama taleefoonka. Lambarka diiwaangelinta iyo faahfaahinta gaariga waa in la bixiyaa; ku guuldaraysiga iibsiga baasaboorka waxay sababi kartaa ganaaxyo qaali ah, shirkadaha kirada baabuurtu waxay inta badan ku dallacaan qarashka maamulkooda kuwaan. La soco in shirkadaha kirada ee waaweyn ay inta badan bixiyaan ikhtiyaar lacag bixin ah, taas oo inta badan ka raqiisan iibsiga kaararkaaga. Tollways waxaa matala calaamadaha wadada buluug iyo huruud ah halkii ay ka ahaan lahaayeen calaamadaha cagaaran iyo caddaanka caadiga ah.
CityLink waa wadada isku xidha T-qaabeeya ee dhex marta xudunta magaalada, isku xidha wadada weyn ee loo yaqaan 'West Gate Freeway' ee galbeedka, Monash Freeway ee koonfurta-bari iyo wadada weyn ee Tullamarine ee waqooyiga. Wadooyinkan waawayn waxay waxtar u leeyihiin safarka Geelong iyo Great Ocean Road, Phillip Island iyo Melbourne Airport siday u kala horreeyaan. Kaadhka 24-ka saac ah wuxuu ku kacayaa $ 16.69 baabuur, $ 8.32 mootooyin iyo in ka badan oo baabuurta waawayn ah (Maajo 2016).
EastLink waa wado weyn oo woqooyi-koonfur laga qaado oo mara xaafadaha bariga waxayna waxtar u leedahay gaaritaanka Mornington Peninsula iyo Frankston. Hal baasaboor safar wuxuu ku kacayaa $ 5.94 baabuurta, $ 2.97 mootooyin iyo in ka badan baabuurta waaweyn (Maajo 2016). Haddii ay u badan tahay inaad isticmaaleyso labada tarabuur, waxaa habboon inaad iibsato a Wadada Melbourne $ 5.50 marka lagu daro kharashka joogtada ah ee khidmadaha iyadoo kuxiran dhererka safarka. Tilmaamaha laga helo magaalooyinka kale ee Australiya waxay ka shaqeeyaan CityLink iyo wadada tareenka laga raaco ee EastLink, laakiin baasaska ma shaqeeyaan.
Melbourne waa magaalo aad ugu fiican socodka oo waa inaadan wax dhib ah ku qabin marin -u -helka shabakadda CBD. Wakhtiga socodka ee u dhexeeya dhammaad kasta oo magaalada ka yar 30 daqiiqo. Socod degdeg ah ayaa laga yaabaa inuu xitaa ku arko inaad la socoto taraamyada markay ku dhex gurguurayaan Bartamaha Magaalada.
Taksiilayaasha Melbourne way ku badan yihiin Xarunta laakiin inta badan waxaa lagu arkaa xaafadaha. Shirkadaha ugu waaweyn waa 13CABS (☎ 13-CABS / 132227), Tagaasida Sare (☎ 131008). Waxaa jira shaqsiyaad ka shaqeeya adeegga tagaasida oo raaxo leh sida CabInMinutes (☎ 0416271787). Tagaasida caadiyan midabkoodu waa huruud, in kasta oo midabyo lacag iyo caddaan ah ay iyaguna jiraan. Qiimayaasha waa la jaangooyey si uu mitirku u bilaabo u calaamadeynta Qiyaasta Maalinta (T1) (9 AM-5AM) $ 4.20 wuxuuna ku kici doonaa $ 1.622/km, Heerka Habeenkii (T2) (5 AM-9AM) $ 5.20 iyo saacadaha $ 1.804/km iyo Peak Rate ( T3) (10 AM-4AM Jimce iyo Sabti) ​​$ 6.20 waxayna ku kici doontaa $ 1.986/km, taasoo la micno ah in hops-ga gaaban ee Xarunta dhexdeeda lagu tagi karo wax ka yar $ 10, laakiin raadka dheeraadka ahi aad buu qaali u yahay. Lacag dhan $ 2 ayaa lagu dabaqayaa taleefoonka lagu goosto tagsi iyo lacag dhan $ 3.58 marka taksi laga soo qaado garoonka diyaaradaha. Fadhiga taraafikada waa $ 0.568/min T1, $ 0.631/min T2 iyo $ 0.695/min T3. Inta u dhaxaysa 10PM iyo 5AM, qiimaha taksiyada ayaa noqon kara horay loo sii iibsaday: Lacag la qiyaasey ayaad siineysaa darawalka horayna qiimaha ayaa loo saxaa marka la yimaado. Ma jiraan wax qiimayaal gorgortan ah oo tagaasida laga qaado Melbourne. Komishanka Adeegyada Tagaasidu waxay ku bixiyaan liistada qiimaha buuxa iyo qiyaasta qiimaha waxtarka leh ee websaydhkooda.
Intaa waxaa sii dheer, adeegyada Uber sidoo kale si ballaaran ayaa looga heli karaa Melbourne.
Dhismaha Carwada Boqortooyada ee ku taal Carlton Gardens loona dhisay Bandhigga Caalamiga ee 1888
Melbourne waa magaalo ku fiican fanka, dhaqanka, cuntada, iyo munaasabadaha. Soo-booqdayaashu waxay had iyo jeer faallo ka bixiyaan "jawiga wanaagsan" ee magaalada, taas oo lagu fahmi karo oo keliya adiga oo naftaadu la kulanto. Waxaa jira noocyo kaladuwan oo kaladuwan oo soojiidasho iyo soojiidasho leh, oo leh wax kasta oo socdaal ah. Intooda badani waxay ku yaalliin Bartamaha Magaalada, meel u dhow gaadiidka dadweynaha. Melbourne sidoo kale waa saldhig wanaagsan oo lagu kulmo meelaha kale ee soojiidashada leh ee Victoria, badankoodna waxaa lagu heli karaa safarada maalinlaha ah.
Ka daawo filimaan xiisa badan Art-Deco-loo qaabeeyey Tiyaatarka Astor gudaha St Kilda. Waxaa jira dhowr barnaamijyo shineemo dayaxeed xagaaga. Bandhigga Caalamiga ah ee Filimada Melbourne wuxuu socdaa Ogosto.
Beddel ahaan, booqo Cinema Nova oo ku taal Lygon Street (taraam 1 ama 8) Isniinta $ 6 filim kahor 4PM.
Booqo Suuqyada Victoria Victoria
Taageerayaasha of Deriskooda sameyn karo booqasho goobaha lagu duubayo
Booqo naadi majaajillo ah. Ku Fadhiga Comic wuxuu leeyahay bandhigyo $ 10-25 ah oo ay ku jiraan riwaayad loo duubay kanaalka 31 Isniinta, ama casho iyo bandhig $ 45 Naadiga majaajillada ah wuxuu leeyahay casho wuxuuna soo bandhigayaa $ 32 wuxuuna muujinayaa keliya $ 7 (qiimaha tigidhada dhimista).
U fiirso habka soo jiidashada leh ee nacnaca adag ee shakhsi ahaaneed ee gacanta lagu sameeyo Suga. Waqtiga qadada waa wakhti fiican oo la arko (iyo muunad!) Waxa ku yaal dukaan ku yaal Suuqa Victoria, laakiin haddii aad booqato goobta Royal Arcade, waxa kale oo aad daawan kartaa shukulaatada samaysa albaabka xiga ee Koko Black.
Daawo ciyaar ka mid ah Kubadda cagta AFL garoonka MCG ama Etihad Stadium inta lagu jiro xilliga qaboobaha, ama a Ciyaar Cricket inta lagu jiro xagaaga.
Dib ugu laabo mid ka mid ah waxyaabaha wanaagsan ee Melbourne kafateeriyada gudaha CBD (Degraves St, The Causeway, iyo jidadka kale ee laamiyada waa kuwo cajiib ku ah tan), South Yarra (Chapel Street) ama Fitzroy (Brunswick Street, Smith Street).
Melbourne waxay leedahay muuqaal muusig toos ah oo firfircoon. Baarar badan iyo baarar badan ayaa yeelan doona nuqulo ka mid ah joornaalada bilaashka ah "Beat" iyo "Inpress" kuwaas oo bixiya hageyaal gig oo maxalli ah. Fitzroy, Collingwood iyo St. Kilda guud ahaan waa sharadadaada ugufiican ee aad ku arki karto qaar ka mid ah hibooyinka maxaliga ah ee weyn ee Melbourne ay bixiso. Goobaha guud ahaan aadan khaldami karin waxaa ka mid ah: "The Evelyn", "The Espy" (waxaa loo xiray dayactirka illaa Janaayo 2016), The Corner Hotel oo ku yaal Richmond & Naadiga Bulshada ee Northcote.
Black Light Mini Golf wuxuu ku yaalaa Docklands. Tani waa 18 god oo mini golf yar oo loogu talagalay agagaarka mawduuca Australia. Waa hoosta iftiin madow oo leh nidaam iftiin iyo cod ah oo leh midabyo dhalaalaya. Waxay ku taal gadaasha dambe Gawaarida Weyn Joogitaanka gudaha waxaa loola jeedaa inaad ciyaari karto sanadka oo dhan, Qiimaha gelitaanka waa $ 13 qof weyn iyo $ 10 ilmo. Waxay qaadataa ku dhawaad ​​1 saac in la ciyaaro. Soojiidashada Black Light Mini Golf waa "The Coffin Ride". Tani waa mid cabsi badan sida ay u muuqato, waxaad ku raaceysaa sanduuq naxdin leh daboolka oo xiran, waxaa jira codad, ur iyo saaxiibbadaada qosol fiican ayey kugu daawan karaan iyagoo TV-ga ka daawanaya.
Melbourne waa meel aad ufiican oo lagu barto xirfadahaaga sawir qaadista. Meelo aad u badan oo sawir qaali ah laga qaado.
Booqo mid ka mid ah meelaha qadiimiga ah iyo jidadka waaweyn ee Melbourne, lagana fogaado jidadka waaweyn iyo jidadka magaalada. Mid ka mid ah kuwan, the Arcade Cathedral, wuxuu sameeyaa wadiiqo cidhiidhi ah, oo isku xidha Swanston Street iyo Flinders Lane oo ku taal degmada ganacsiga dhexdiisa. Waa qaab qaab-dhismeedka T-qaabeeya, hase yeeshe mid ka mid ah marinnada dhaadheer ayaa ku dhammaada gudaha dhismaha Nicholas.
Matxafyada Melbourne guud ahaan waa kuwo si wanaagsan loo tixgeliyo oo mudan in la soo booqdo haddii aad haysato waqti aad ku nasato. Ku Matxafka Melbourne iyo Muuqaalka Qaranka ee Fiktooriya badiyaa waxay leeyihiin bandhigyo ku meel gaar ah oo xiiso leh.
Booqo xeebta (St Kilda, Brighton, ama Frankston dhanka bari. Williamstown dhanka galbeed.)
Daawashada tennis-ka bisha Janaayo. Furitaanka Australia or Kooyong Classic
Khibrad cunno wanaagsan oo taraamka magaalada dhexdeeda ah http://www.tramrestaurant.com.au/
Lagu madadaaliyo Casino taajkii
Socdaal lugeyn ku aado muuqaal dabiici ah Mt Dandenong -Ku dadaal naftaada jir ahaan 1000 tallaabooyinka, ama booqo magaalooyinka qurxoon ee Sassafras ama Olinda, ama raac raac bas tareenka uumiga ah ee qarniga Puffing Billy
Qabooji baxay Beeraha Botanical ama mid ka mid ah jardiinooyinka badan (Albert Park, Carlton Gardens, Fitzroy Gardens)
Ha qoslo Bandhig Faneedka Caalamiga ah ee Melbourne bisha Maarso / Abriil sannad kasta
Eeg farshaxanno ciid ah oo la yaab leh Frankston meel u dhow laga bilaabo dhammaadka Diseembar illaa Abriil sannad kasta (raac khadka tareenka ee Frankston)
Daawo Australiya Grand Prix bisha Maarso / Abriil sannad kasta
Booqo Eureka Skydeck aragtida ugu fiican ee magaalada heerka 88 ee Eureka Tower. Ama ku raaxeeyso cunno wanaagsan adigoo ballansanaya heerka 89 ee Eureka Tower.
Booqo mid ka mid ah Shineemooyinka bannaanka ee Melbourne bilaha kuleylka sanadka (Nofeembar ilaa Abriil)
U soo labbasho "tartanka joojiya qaran" Talaadada ugu horreysa Nofeembar Koobkii Melbourne, ama mid ka mid ah jinsiyadaha kale Carnival Tartanka Guga
Booqo mid ama dhammaan seddexda xayawaan ee cajiibka ah. http://www.zoo.org.au/ Goobta Xayawaanka ee Melbourne, booqdayaashu waxay leeyihiin fursado dheeri ah oo ay kula falgalaan, xayawaanka ku qaataan, ugana qaadaan sawirro dhow xayawaanno badan, oo ay ku jiraan kangaroos, meerkats, lemurs, iyo kuwa kale
Tareen raac bilaash ah ku wareeji magaalada gudaheeda khadka xariiqda magaalada oo bilaash ah (marin 35).
Ka eeg Melbourne's Yarra River agtiisa kayak
Booqo Maktabadda Gobolka ee Victoria
Waad qaadan kartaa fasalo luqadeed, waxaad ka mid noqon kartaa koox buugaagta lagu qaxweeyo, waxaad baran kartaa sawir qaadista, waxaad iska diiwaan gelin kartaa socod taariikheed ama cunto, waxaad wax ku baran kartaa shahaadadaada waxbarasho ee Victoria ama waxaad ku qaadan kartaa fasalo kombuyuutar ama ganacsi Golaha Waxbarashada Dadka Waaweyn (CAE). CAE sidoo kale waxay hoy u tahay Maktabada Magaalada halkaas oo aad iska diiwaan gelin karto si aad u amaahato buugaag ama aad ugu aqriso joornaalada makhaayadooda.
Melbourne waxay hoy u tahay jaamacado dhawr ah, oo laba ka mid ahi ka tirsan yihiin sumcadda caanka ah ee “Kooxda siddeedaad”: the Jaamacadda Melbourne iyo Jaamacadda Monash. Waxaa jira fursado ardayda caalamiga ah ay iskaga qoraan jaamacadahaan, ama barnaamijyadooda shahaadada ama heshiisyada isdhaafsiga ee jaamacadaha shisheeye, waana kuwan fursado ay ajaanibtu ugu noolaadaan Melbourne mudo dheer.
Warshadaha ugu caansan ee fasaxa shaqada waa inay ka shaqeeyaan shaqooyinka soodhawaynta agagaarka aagga St. Kilda. Mushaharka dhammaan warshadaha kale badanaa way ka fiican yihiin ka shaqeynta martigelinta laakiin waxay u baahan yihiin xirfado gaar ah oo gaar ah.
Goynta miraha waa isha dakhli ee suurtogalka ah laakiin agagaarka weyn ee Melbourne shaqooyin badan lama bixiyo. Waxaad ka heli doontaa fursado ka sii fiican ganacsiga caanaha laakiin waa inaad leedahay khibrad aasaasi ah. Geedka canabka ah ee la rabo waa suuragal kale oo ka jirta Dooxada Yarra ee u dhow.
Wadada Collins Street waxay ku faantaa dukaamo badan oo dabaq ah iyo dukaamo.
Saacadaha wax iibsiga ee metro Melbourne caadi ahaan waa 7 maalmood usbuucii, 9 AM–5: 30PM maalmaha shaqada iyo 9AM (laga yaabee goor dambe) –5PM dhamaadka todobaadka. Inta badan Xarumaha wax -iibsiga ee ku yaal agagaarka sida Chadstone waxay leeyihiin saacadaha dambe ee xiritaanka Khamiista iyo Jimcaha - badiyaa ilaa 9PM. Dukaammada waaweyni waxay kordhiyeen saacadaha 7 maalmood, badankoodu waxay furmayaan 7AM waxayna xirmayaan saqda dhexe ama 1AAM; waxaa kaloo jira dukaamo waaweyn oo badan oo 24-saac ah.
The Arcade Block Arcade oo ku taal Wadada Collins
Melbourne waxaa loo yaqaanaa caasimada moodada ee Australia iyadoo leh suuqyo fara badan iyo jidad dhismayaal lagu xardho.
CBD lafteeda, Wadada Little Collins waxay hoy u tahay qaar ka mid ah naqshadayaasha adduunka ugu sarreeya iyo guryaha moodada; Wadada Collins sidoo kale waxay ku faantaa dukaamo kale oo sare sida Louis Vuitton iyo Hermes. Wadada Brunswick (Fitzroy), iyo dhamaadka koonfureed ee Wadada Chapel gudaha Prahran / Windsor, waxay leeyihiin kooxo isugu jira dukaamo iibiya iskudhaf isku dhafan oo ah guridda, rave, retro iyo qalabka kale sida Shag, Fat Helen's iyo Beaut Vintage si ay uga dukaameystaan.
Bartamaha Melbourne waa suuq kale oo laga dukaameysto oo ku yaal magaalada, kuna dhow saldhigga dhulka hoostiisa ee isla magacaas leh. Ku Suuqa Bourke Street oo leh dukaanka waaxda David Jones, iyo sidoo kale dukaanka weyn ee Myer, silsiladda dukaammada ugu weyn ee Australia, waa xarun-ganacsi oo kale oo bartamaha magaalada ah.
Dukaameystaha wax iibsiga, waxaa ku yaalo Xarumo Ganacsi oo loo yaqaan 'DFO Outlet Malls' oo ku yaal Spencer Street, magaalada Melbourne, oo woqooyiga ka xigta saldhigga tareenka ee Koonfurta Cross.
Waddada Elizabeth Street waxay leedahay dukaamo iibiyaal iibiyayaal badan oo iib ah, tusaale ahaan Mitchell's Adventure (255-257 Elizabeth Street), oo ku siin kara badeecado bannaanka ka ah qiimaha gorgortanka.
Wax ka iibsiga xaafadaha magaalada
Bridge Road ee Richmond waa xariiq meesha bakhaarada tooska ah ay wax uga xukumaan oo aan cidina bixinaynin tafaariiqda lagu taliyay. Wadada Chapel Koonfurta Yarra ayaa ugu jecel dadka deegaanka, iyada oo ku faafaya dukaamo gaar ah, makhaayado iyo dukaamo silsilado si wanaagsan loo aasaasay. Waxa kale oo jira dhismayaal ganacsi oo waaweyn oo ku yaal hareeraha hareeraha, sida Chadstone iyo Southland (Cheltenham) ee Koonfurta-Bari. Doncaster Shoppingtown, Eastland (Ringwood) iyo Knox City waxay ku yaalliin bariga fog. Northland waqooyiga, Highpoint galbeedka.
Melbourne waxay kaloo hoy u tahay qaar badan oo ka mid ah Xarumaha wax iibsiga ee ugu waaweyn Australia; oo ay ku jiraan Xarunta Dukaameysiga Chadstone ee Bariga Malvern (Xarunta ugu weyn ee dukaamaysiga ee Koonfurta Hemisphere) oo leh in ka badan 530 dukaan, Knox City Shopping Center oo leh 350 dukaan, iyo Fountain Gate Shopping Center ee Casey oo ay ku jiraan ku dhawaad ​​330 dukaan.
Wax si gaar ah u raadinaya?
Luna Park oo ku taal St Kilda
Kuwa suuqa arooska, High Street gudaha Armadale, Stonnington iyo Wadada Sydney gudaha Brunswick, Melbourne / xaafadaha waqooyiga waa labada qaybood ee ugu waaweyn dharka arooska iyo kaabayaasha. Kuwa raadinaya maxalliga, abuurista naqshadeeyayaasha isku day, iskuday Wadada Greville Koonfurta Yarra, Stonnington ama Wadada Smith waxayna ku wareegsan tahay Yarra.
Si aad u iibsato xusuus qosol iyo alaabooyin caadi ah oo Australiya ah, soco ama taraamka u raac Suuqa Victoria. Waxaad ka heli doontaa waxaad u baahan tahay oo dhan halkaas oo qiimaha badanaa badh ama saddex meelood meel ka mid ah qiimaha dukaamada xusuusta ee magaalada hoose. Hubso inaad isku daydo ey ey bratwurst oo iska hubi xerooyinka farmaajada intaad halkaa joogto.
Makhaayadaha Xalaal ee Melbourne
Indian Makhaayadaha Xalaasha
Makhaayadaha Hindida waxaa laga heli karaa Melbourne oo dhan, gaar ahaan magaalada, Waqooyiga Melbourne, iyo xaafadaha bari ee gudaha sida Richmond iyo Hawthorn. Waxa kale oo magaalada ku yaal baarar cunno fudud oo fara badan oo Hindi ah oo u adeega kalyo raqiis ah laakiin dhadhan fiican leh iyo sambuus, qaab kafateeriya ah.
Cuntada Nepalese sidoo kale caan ayey ku tahay Melbourne, maqaayadaha qaarna waxay ka muuqdaan cunnooyinka Nepalese iyo Hindida labadaba. Tiro sii kordheysa oo maqaayadaha Hindida ah ayaa bixiya bixinta guryaha.
Makhaayadaha Xalaasha Indonesia
Iyada oo ku habboon ardaydeeda tirada badan ee reer Indonesia, Melbourne waxay leedahay makhaayado badan oo Indooniisiyaan ah. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa Blok M oo ku yaal Wadada Ganacsiga, Prahran, oo dad badan oo caan ah oo reer Indonesia ah ay booqdeen. Makhaayad kale oo caan ah waa Nelayan oo leh laba makhaayadood oo ku kala yaal Swanston Street iyo Glenferrie Road, Agung oo ku taal Glenferrie Road, Bali Bagus oo ku taal Franklin Street, Es Teler 77 oo ku taal Swanston St, Nusantara oo ku taal Caulfield iyo Bali Bowl oo ku taal Flinders Lane. Waxaa sidoo kale jira Warung Gudeg, oo ku takhasusay cunnooyinka maxaliga ah ee Jogjakartan ee Clayton.
Maleysiyaan / Singabuur Makhaayadaha Xalaasha
Maleesiyaanka iyo dadka reer Singabuur ee dareensan guri la'aantu waxay heli doonaan makhaayado badan iyo goobaha cuntada lagu iibiyo oo bixiya waxyaabo ay ka mid yihiin roti canai / paratha, nasi lemak, noodles prawn, iyo laksa. Kuwo badan ayaa ku yaal Xarunta Magaalada; waxaa jira makhaayado Malaysiya ah oo ku baahsan Melbourne oo dhan. Little Bourke Street waxay leedahay dhowr makhaayadood oo ay maamusho Maleysia iyo sidoo kale QV's Kopitiam (geeska Lonsdale iyo Swanston St, CBD), Boxhill wuxuu leeyahay orod cusub oo Malaysiya ah (oo ay weheliyaan cunto kariyeyaasha Maleesiyaanka ah - cunnooyinka ugu badan ee malaysia laga cunteeyo waxay ka shaqeeyaan Shiinaha) cunno lagu magacaabo Petaling Street ayaa bixisay qiimaha ugu saxsan illaa iyo hadda.
Makhaayadaha Bariga Dhexe ee Xalaasha ah
Makhaayadaha Carabta, Lubnaan, Marooko iyo Turki waxay u badan yihiin inay ku urursan yihiin Waddada Sydney ee Brunswick iyo Coburg oo ku taal woqooyiga Bartamaha Magaalada. Makhaayadan ayaa sidoo kale laga heli karaa xaafadaha bannaanka ee ay deggan yihiin bulshooyinkaas, oo ay ku jiraan Dandenong dhammaantoodna waa Xalaal.
Melbourne waxay leedahay dhaqan dheer oo qaxwo leh oo ka bilaabmaya daarihii qaxwaha xilligii Fiktooriya waxaana sii wanaajiyay tahriibayaasha Talyaaniga ee yimid wixii ka dambeeyay Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Waxaa laga yaabaa in kafeega Talyaani ee ugu caansan uu yahay kan Pellegrini, 66 Bourke St, magaalada Melbourne. Fitzroy waxaa loo yaqaan maqaaxiyo madadaalo leh, oo leh makhaayado u eg bohemian. Wadada Collins Street waxaa ku yaal makhaayado badan oo qurux badan. Makhaayado badan oo Talyaani ah ayaa laga helaa Carlton; Brunetti ayaa furan yahay goor dambe oo had iyo jeer la buuxiyo.
Aqoon yahanada espresso ee halista ah waxay ku raaxeysan doonaan booqashada St Ali cafe / roastery ee Koonfurta Melbourne, Xaraashka Qolalka (Errol St) ee Waqooyiga Melbourne, ama maqaayada Maling Room ee Canterbury.
Kafeega Atomica (268 Brunswick St, Fitzroy, tel +61 3 9417-4255) waxay u adeegtaa isku dhaf adag, laakiin isku dheelitiran oo kafee iyo caano siman oo jilicsan. Atomica sidoo kale kuraas ayey ku leedahay cagta cagta, haddii muusigga kor u kaca uu aad ugu badan yahay qaxwahaaga, maalinta qoraxdu diirran tahay, waa goob ku habboon in lagu dhex daro waddada Brunswick Street.
Xarunta Cagaaran (115 Wadada Sydney, Brunswick, tel +61 3 9387-1150), Way fududahay in la seego, laakiin si ka sii wanaagsan ayaanad samayn. Waxay u adeegtaa qiimo aad u qiimo badan oo cuntada lagu kariyo oo macmal ah, iyo tayo kafee Illy ah oo la socota. Dadwaynuhu waa iskudhaf isku dhafan oo ka mid ah fanka Brunswick artsy, ardayda jaamacadda iyo xirfadlayaal da 'yar oo riixaya carruurta. In kasta oo ay tahay qoraal aan macna lahayn (raadso calaamadda kafeega ah ee 'Illy' ee ka soo baxda daaqadaha hore), dhibaatada ay leedahay helitaanka meeshan ayaan wax saameyn ah ku yeelan caannimadeeda gabi ahaanba.
7 grams (505 Church St, Richmond, ☎ +61 3 9429-8505) waxay leedahay kafeega 'ugu fiican show'. Makhaayadda lafteedu waa mid aan la aqbali karin, oo leh qurxin aan fiicnayn iyo isku xigxiga oo saqafyo madow leh, oo leh lugo cagaha leh oo ay weheliso baarka muraayadda.
Heerka 65 (309 Exhibition St, ☎ +61 3 9662-1080) Milkiilayaashu waxay leeyihiin taariikh dheer oo ah amaano. Champista barista, farshaxanka latte adduunka iyo abaalmarinta isku darka kafeega, gridlock kafee. Si dhakhso leh, adeeg saaxiibtinimo leh iyo qaar ka mid ah qaxwaha ugu fiican agagaarka.
Cafe Superstore Cafe (690 Elizabeth St, ☎ + 61 3 9349-5529) waxay u adeegtaa kafee weyn oo ay la socdaan shaqaale heer sare ah oo aad ugu raaxeysan karto shaah aad u sareeya oo ay ku hareeraysan yihiin funky New York iyo Paris naqshadeynta gudaha. Maxaa ka dhigaya makhaayadani xitaa mid gaar ah inaad sawir ka qaadi karto sawir qaade xirfad leh isla goobta.
Halkee laga joogaa Melbourne
Bangiga Melbourne Southbank
Ikhtiyaarada dejinta miisaaniyada Melbourne waxaa laga heli karaa laba aag oo waaweyn, oo kala ah Xarunta Magaalada iyo agagaarka xeebta St Kilda. Si kastaba ha noqotee, bannaanka labadan aag, sidoo kale waxaa jira dhowr ikhtiyaarro miisaaniyadeed oo caan ah oo ku yaal bohemian Fitzroy, South Melbourne, iyo Windsor.
Boorsada Greenhouse, telefoonka bilaashka ah: 1800 249 207. Ma hostel guuleystay abaalmarinta Hall of Fame ayaa ku taal bartamaha Melbourne oo ku taal 228 Flinders Lane. Marti kasta wuxuu helaa internet bilaash ah oo aan xadidneyn 24/7, quraac maalinle ah oo bilaash ah, soo dhaweyn 24 saac ah, shan dalxiis oo gudaha ah iyo inbadan.
Melbourne Metro YHA. Waa hoyga abaalmarinta lagu guuleysto ee ku yaal faras magaalaha, oo u dhaw meelaha soo jiidashada leh oo ay ku jiraan Queen Victoria Market iyo Zoo. Hoygaani madadaalo waa goob fiican oo lagu nagaado marka aad booqaneyso Melbourne.
Bartamaha YHA. Waxay ku habboon tahay Bartamaha Magaalada. Waxay ku taalaa wadada tareenka City Circle iyo inta badan soo jiidashada Melbourne waxay u jirtaa masaafo socod. Shaqaaluhu waa kuwo saaxiibtinimo leh, caawiya oo daryeela. Waxaa la furay 2009 waana mid aad loo dayactiray.
All Nations Backpackers hostel, 2 Spencer St,, lacag-la'aan: 1800 666237, fax: + 61 3 9620-1033. Soo dhaweynta 24-saac. Sariiraha jiifka ah laga bilaabo $ 19, hal $ 38, laab $ 48.
Reer guuraaga Melbourne (Warshadaha Reer Guuraaga), 198 A'Beckett St,, lacag-la'aan: 1800 666237. Soo gal: 2PM, out-out: 10AM. Si toos ah uga soo horjeedka Suuqa Queen Victoria.
Boorsooyinka United, 250 Flinders St. Soo gal: 2PM, out-out: 10AM. Ka soo horjeedka Flinders Street Station, ee ku yaal Bartamaha Melbourne.
Guriga Martida ee Claremont, dhisme taariikhi ah 1886. AAAT ayaa ku qiimeysay Guriga Martida ee 3-Star ah, waana ku guuleyste badan oo ka mid ah abaalmarinta 'Hostelworld' ee bil kasta 'Hostel ugu Fiican Australia' sida ay u codeeyeen boorsooyinka gadaal. Wi-fi bilaash ah Quraac bilaash ah. Gaadiidka dadweynaha ee albaabka.
Guryaha CityTempo, guryaha is haysta ee CBD ee kuyaala Queen Street agagaarka Suuqyada Queen Vic. 4 Xiddigaha (AAA Dalxiiska), dhammaan linenka / tuwaalada lagu bixiyo jikada. Guryaha qaar waxaa ka mid ah dharka dhaqe / qalajiyaha. 353 Queen Street, Melbourne. Wicitaan bilaash ah gudaha Australiya: ☎ 1800 248 983
Agagaarka Melbourne F1 Grand Prix (dabayaaqadii bishii Maarso) iyo munaasabado kale oo caalami ah, hoyga hoteelada ayaa laga xareeyay qaar ka mid ah hoteelada ayaa qiimeyadooda kor u qaada. Hubso inaad horay u sii qabsato.
Hoyga ku jira jaangooyaha sicirka waxaa inta badan laga heli karaa Xarunta Magaalada. Si kastaba ha ahaatee waxaa jira ikhtiyaarro ku baahsan daafaha magaalada.
Rendezvous Grand Hotel Melbourne, 328 Flinders Street Melbourne VIC 3000. Mid ka mid ah hoteelada taariikhiga ah ee ugu wanaagsan Australia. Waxaa la dhisay 1913, hudheelkan si taxaddar leh loo soo celiyey wuxuu hayaa qaabkii bilicsanaa ee horaantii 1900-meeyadii isagoo ku siinaya dhammaan wixii ku habboon tikniyoolajiyadda iyo qarniga 21-aad. Baarkinka waa la heli karaa. Laga soo bilaabo 189.
Jika International Motel - Melbourne - Fairfield. +61 3 9481-2822 Fakis +61 3 9489-8819.
Motels Chain Golden - Melbourne waxay leedahay goobo badan oo ku yaal Melbourne iyo nawaaxigeeda oo u adeega hoy tayo leh qiimo jaban.
Xarunta Magaalada ayaa wali ah aaga ugu weyn ee qaybtan hoy.
Blackman - Hoteel taxane farshaxan ah, 452 Wadada St.Kilda. Guri shan xiddig leh oo leh 207 qol. Hoteelka ayaa loogu magac daray fanaanka Charles Blackman waxaana isla markiiba laga dhisay dhabarka Airlie Mansion.
Como Melbourne, 630 Chapel St. Huteelkan yar yar ee Yarra hudheelku wuxuu ku yaal jidka loo yaqaan 'Chapel Street'.
Grand Hotel Melbourne, 33 Spencer St,, lacag-la'aan: 1300 361 455. Huteelkan dabaqyada ah ee ku taxan hidaha ayaa dib loo soo celiyay si uu u haysto qaabkii 1880-meeyadii iyadoo martida la siinayo tas-hiilaad casri ah.
Huteelka Lindrum, 26 Flinders St. Hotel Lindrum waa hudheel qurxoon oo bixiya hoyga iyo tas-hiilaadka casriga ah.
Adeegyada Boosta ee Melbourne
GPO hore Melbourne, hada dukaan H&M ah.
Dab dab ka kacay dhismihii asalka ahaa ee 2001, intiisa badan Xafiiska weyn ee Boostada Melbourne (250 Elizabeth St; ☎: 13 13 18; Fakis: 9203 3078; M – F 8:30 AM–5:30PM, Sa 9 AM–4PM, Su 10 AM– 4PM;) Hadda waxaa loo beddelay goob tafaariiqda dukaameysan. Xafiiska ugu weyn ee boostada ee Melbourne CBD wuxuu ku yaalaa geeska Elizabeth iyo Little Bourke Streets. Adeegyada Poste restante sidoo kale halkan ayey ku yaalliin.
Telefoonada lacagta lagu shubo ee qadaadiic ah ayaa wali laga heli karaa hareeraha magaalada. Saldhigyada dhow iyo xafiisyada boostada waa meelaha caadiga ah ee laga raadsado. Kaararka wicitaanka ee caalamiga ah sidoo kale waxaa laga heli karaa xarumahan. Isticmaalka taleefanka lacag bixinta si aad u sameyso wicitaan maxalli ah ayaa kugu kici doona $ 0.50 (aan la sii deynin, in kastoo taleefannada qaarkood ay ku xaddidayaan wicitaankaaga 15 daqiiqo).
Caymiska taleefanka gacanta ee gudaha CBD iyo hareeraheeda badanaa waa mid fiican-heer sare. Adeegyada 3G iyo 4G ayaa laga heli karaa magaalada oo dhan. Waxaad u baahan doontaa aqoonsi si aad u iibsato kaarka (PAYG) kaarka lacagta lagu shubto, oo lagu iibiyo inta badan dukaamada ku habboon, joornaalada iyo dukaamada waaweyn. Tan waxaa laga codsan karaa waqtiga wax iibsiga, iyo / ama waqtiga waxqabadka.
Shirkadaha ugu waaweyni waa Telstra, Optus iyo Vodafone. Amaysim, oo adeegsada shabakadda Optus ayaa ah qiimaha ugu fiican, waxaana laga soo qaadan karaa Bakhaar kasta oo ah 7 Eleven; ogow inaad dhaqaajineysid waxaad u baahan doontaa cinwaan buuxa oo Australia ah iyo marin u helida emaylka; marka lagu daro, uma oggolaanayso isku-xidhka howlaha cusub. Haddii aad rabto inaad sameyso wicitaano caalami ah oo raqiis ah, Lebara iyo Lycamobile ayaa ah xulashooyinka ugu fiican.
Koodhka aagagga Melbourne ee taleefannada guryaha waa 03 (heer caalami wac +613). Si aad u sameyso wicitaan toos ah oo caalami ah, koodhka marinka marinka guud ahaan waa 0011 ama si fudud ugu dar + hore lambarka haddii taleefankaagu kuu oggolaado.
Maqaayada Internetka ee Melbourne
Melbourne waxay bixisaa WiFi-ga dadweynaha oo bilaash ah kaas oo u oggolaanaya illaa 250 MB qalab kasta, maalintii oo aan u baahnayn macluumaad shakhsiyeed ama muujinta xayeysiis pop-up ah oo laga helo Melbourne CBD oo ay ku jiraan saldhigyada tareennada ee CBD, Bourke St Mall, Queen Victoria Market iyo South Wharf Promenade Xarunta Shirka iyo Bandhigga ee Melbourne, makhaayadaha Internet-ka ee 'additionaly Internet ka' ayaa ku yaal magaalada oo dhan, gaar ahaan agagaaraha boorsooyinka boorsooyinka ee St Kilda iyo Flinders Street. Xawaaruhu badanaa waa kuwo aad u fiican oo qiimayaashu waxay u dhexeeyaan $ 2.50-12 saacaddii, ugu jaban ee badanaa laga helo isku-darka suuqyada / kafateeriyada internetka ee qaybaha Aasiya ee magaalada.
Sanduuqyada taleefannada Telstra, Dhamaan Melbourne oo dhan. Sanduuqyo badan oo taleefanno ah, oo haddii kale si yar looga faa'iideysto, waxay noqdeen goobaha Wifi. Waxaa lagu aqoonsan yahay xabbad buluug ah oo buluug ah oo la dhigo dusha sanduuqa taleefanka. Kaliya fur furayaashaada wifi kuna xir 'Telstra wifi bilaash ah'. Ugu dambeyntii goobahan kulkulul waxay noqonayaan adeeg lacag la siiyay, laakiin bilowga sanadka 2015 waa la tijaabinayaa, qof walbana waa loo heli karaa 30 daqiiqo oo bilaash ah.
mag qaran, 88 Elizabeth St. Dukaankan wuxuu leeyahay WiFi bilaash ah.
Meelaha Internetka ee HiSpeed (Dhanka Spencer Street DFO.). Silsilad dukaamo badan ku leh dalka oo dhan. 21 daqiiqo $ 2.
e: FiftyFive (55 Elizabeth Street, Melbourne) wuxuu la mid yahay qol weyn oo ka mid ah qolalka jiifka ee dhulka hoostiisa oo dareensan sida baarka oo kale marka loo eego maqaayada internetka. DJ-yada waa weyn, sariisho raaxo leh iyo wasakh-raqiis ah $ 2 / saacad gelitaanka internetka markii aad cabto iibsanayso waxay soo jiitaan dad badan oo safar ah waxayna ka dhigi doonaan qoritaanka emailka guriga khibrad raaxo leh.
VA (Bourke Street, Melbourne) waa mid ka mid ah kuwa aan la tirin karin laakiin la dhihi karo waa makhaayadaha ugu fiican ee internetka / LAN ee Melbourne, oo ay ka buuxaan “ciyaartooy adag” maalinta Axadda galabtii (maalinta tartanka la isboonsar gareeyay). Qiimaha xubinta aan xubin ka aheyn wuxuu ka bilaabmaa $ 3.50 / saacad halka xubinnimada ay ku kacayso kaliya $ 15 (oo ay kujirto $ 12 amaah) macaashka waxaa ka mid ah dalabyo ciyaar sida $ 4/2 saacadood, $ 5/3 saacadood iyo $ 6/4 saac, iyo sidoo kale xirmooyinka maalin iyo habeenba.
Cydus (Victoria Street, Waqooyiga Melbourne) adeegyo badan oo isticmaalka internetka ah maalin kasta iyo wakhti kasta (oo ay ku jiraan inta badan ciidaha dadweynaha). Qiimaha xubnaha aan xubinta ka aheyn waxay ka bilaabmaan $ 3 / saacad halka xubinnimada ay ku kacayso $ 10 (oo ay kujirto 2 saacadood oo ciyaar bilaash ah) iyo sicirka xubinimadu waa $ 2 / saacad halka xubinta la bixiyo ay ka mid yihiin "Endurance Pass" (5 saacadood ciyaar + $ 2.80 foojar) iyo "Badbaadada Badbaadada" 10 saacadood ciyaar).
Maktabadda Magaalada, 253 Flinders Ln. Helitaanka internet-ka oo bilaash ah iyada oo loo marayo Adeegga Maktabadda Melbourne (qiyaastii 2 Mbps hoos ah iyo soo dejin).
The Maktabadda Gobolka . Waxay bixisaa internet bilaash ah oo ka shaqeeya xarumo badan umana baahna xubinnimo (waxay ku egtahay 15 daqiiqo ama 1 saac casharkiiba, ma jiro xadka fadhiga). Waxaad ka heli kartaa xubinimo bilaash ah marin-u-helka shabakadda bilaashka ah ee bilaa-waayirka ah, hase yeeshee, marin-u-helka wirelessku wuu xadidan yahay lagamana yaabo inaad marin u hesho bogagga iyo adeegyada qaarkood. Xarumaha daabacaadda sidoo kale waxaa lagu bixiyaa lacag.
Xarunta wax iibsiga ee Melbourne Central (geeska Swanston iyo La Trobe St) wuxuu leeyahay adeeg internet internet oo bilaash ah.
Australia oo ku taal Xarunta dukaamaysiga ee Collins (on the Collins St) wuxuu leeyahay adeeg internet internet oo bilaash ah.
Xayiraadda Federaalka (geeska wadada Flinders Street iyo Swanston Street, oo ka baxsan saldhigga tareenka ee Flinders Street) waa meesha ugu weyn Australia ee bilaashka ah ee wireless-ka ah.
McDonald ee. Ku dhowaad dhammaan laamaha McDonald ee magaalada waxay leeyihiin WiFi bilaash ah. Shabakadu si adag ayaa loo sifeeyay, oo waqtiga iyo xawaaraha xawaaraha labaduba way xadidan yihiin, laakiin waa inaad awoodaa inaad hubiso emaylka oo aad sameyso inta badan shabakadaha aasaasiga ah.
Qunsuliyadaha ku yaal Melbourne
Shiinaha, 570 Wadada St. Kilda,, fax: + 61 3 9822-0606.
Greece, 37-39 Albert Road Melbourne, Victoria 3004,, fax: + 61 3 9866-4933.
Hindiya, 344, Wadada St. Kilda,, fax: + 61 3 9696 8251.
Indonesia, Wadada 72 Queens. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
New Zealand, Heerka 4, 45 William St,, fax: + 61 3 9678-0204.
Boqortooyada Ingiriiska, Dabaqa 17-aad, 90 Collins St.
United States, 553 Wadada St. Kilda,, fax: + 61 3 9525-0769.
Ammaan ahaato oo iska ilaali khayaanada Melbourne
Melbourne guud ahaan waa magaalo aad u ammaan badan baaxaddeeda, in kasta oo qaybo ka mid ah Melbourne si fiican looga fogaado habeenkii; kuwaas waxaa ka mid ah qaybo ka mid ah xaafadaha galbeedka ee ku xeeran Footscray iyo Sunshine, qaar ka mid ah xaafadaha waqooyiga sida Broadmeadows iyo xaafadaha koonfureed sida Frankston iyo Dandenong. Bartamaha Magaalada, gaar ahaan agagaarka goobta lagu caweeyo iyo naadiga naadiga ee King Street, waxay noqon kartaa meel ay ka dhacaan rabshado aalkolo shiday habeen dambe. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u badan tahay inay ku qoslaan kuwa cabaya ee sakhraansan iyo kuwa lugeeya waddooyinka intii laguu hanjabi lahaa ama si aan kala sooc lahayn loo weerari lahaa. Muujinta taxaddarrada badbaadada caadiga ah iyo joogitaanka waddooyinka iftiinka leh ayaa ah hab wanaagsan oo looga fogaado dhibaato.
Saraakiisha Adeegyada Difaaca (PSOs) waxay kormeeraan xarumaha tareenka ee Melbourne laga bilaabo 6PM ilaa tareenka ugu dambeeya, iyadoo dhammaan saldhigyada ay leeyihiin 'aag badbaado' oo ay ku sii kordhayaan laydhku, kaamirooyinka CCTV iyo helitaanka fudud ee badhanka degdegga cas. Tareenadu sidoo kale waxay wataan badhano marka xaalad deg deg ah timaado, halka ay fikrad fiican tahay in la ag fadhiisto darawalka inta lagu jiro tareenka, taraamka ama baska goor dambe oo habeenkii ah. Iskuxirka gaadiidka dadweynaha guud ahaan waa amni, in kastoo socotada mukhaadaraadka ama aalkolada ay saameeyeen mararka qaarkood ay murugada siiyaan rakaabka kale.
Haddii aad gaari wadid, iska jir xatooyada baabuurka ama jabsashada. Ka ilaali waxyaabaha qiimaha leh meel aan la arki karin markaad dhigato, markasta gaariga xir oo daaqadaha ka daaya intaadan bixin. Haddii aad ku sugeysid gaarigaaga, xiro gaariga sidoo kale. Sarkaalka booliisku wuxuu markasta tusayaa aqoonsi kahor inta uusan ku weydiinin inuu furo albaabka ama daaqadda.
Jeeb qaadashada waa ku yar tahay Melbourne, laakiin la soco alaabtaada gudaha iyo agagaarka Saldhigga Flinders Street iyo meesha ay ku badan yihiin dadka u dhexeeya Flinders iyo Collins Streets ee Swanston Street. Tuugsadayaashu waxay aadaan darafyada koonfureed ee Wadooyinka Elizabeth iyo Swanston, inkasta oo ay u badan tahay inaysan dhibaato ku siin doonin.
Inkastoo fiisa waa ku yar yihiin Melbourne, qaarkood wakiilada guryaha isku day inaad ku ugaadhsato shisheeyaha adoo ka jaraya kharashka magdhow aan jirin iyo nadiifinta curaarta. Ururka Kireystayaasha ee Fiktooriya ayaa kaa caawin kara arimahan markaad u soo guureyso ama aad u soo degayso.
Waa muhiim inaad is ilaaliso khadadka taraamka. Tareenadu way culus yihiin waxayna ku qaadan kartaa in ka badan 100 mitir taraamku inuu si nabad ah u istaago. Xitaa haddii taraam ay dhaaftay, si taxaddar leh u eeg labada dhinacba, maxaa yeelay taraamyada ayaa badanaa sanka-ilaa-dabada ku mari doona marinnada mashquulka badan sida Swanston Street. Haddii aad gaari wadid, waa sharci darro inaad U jeesato wadada taraamka ama aad dhaafto taraam inta albaabadu furan yihiin rakaabkuna ay ka degayaan.
Beacon Cove Beach, Port Melbourne
Melbourne waxay si cadaalad ah ugu taalaa xeebta Victoria, waxaana jira soojiidasho badan oo dabiici ah iyo dad samee ah oo sameeya safar maalin wanaagsan ah Qaab kale oo loo booqdo gobolka Victoria waa iyada oo laga faa'iideysanayo VicLink nidaamka gaadiidka dadweynaha. Socdaallada tareenka ee caadiga ah waxay ka baxaan saldhiga Southern Cross. Soojiidashada gobolka waxaa ka mid ah:
Golaha Magaalada South Melbourne
Meelahani waxay u jiraan hal saac inta u dhexeysa bartamaha Melbourne.
Melbourne / xaafadaha galbeedka - daar taariikhi ah iyo xero xayawaan furan
Dandenong Ranges - Beerta qaran, beero, tareenka uumiga taariikhiga ah
Dhadhaminta khamriga ee Dooxada Yarra, Healesville iyo Sanctuary Healesville
Port Phillip Bay muuqaal dabiici ah iyo Jasiiradda Mornington - meelaha loo dalxiis tago ee Sorrento iyo Portsea, oo bixiya labada dhinac ee bayside iyo xeebta
Warburton iyo Mount Donna Buang - baraf indha indheynta xilliga qaboobaha
Mount Buller - barafka iyo daawashada.
Goobaha Goldfields - Bendigo, Ballarat, Castlemaine, Maldon.
Xadiiqadda Qaranka ee Grampians.
Xeebta Koonfur Galbeed - Geelong, Jasiiradda Bellarine, iyo Wadada Weyn ee Weyn, oo leh muuqaallo muuqaalkeedu badan yahay.
Markaad ka tagto Port Melbourne, ka qaado Ruuxa Tasmania ilaa Devonport, albaabka laga galo Tasmania. Isgoysyadu waxay qaadanayaan ugu yaraan 12 saacadood.
Baadhitaano badan oo Australia tagaya Xalaal
Tilmaamaha Safarka Xalaasha ah ee Alice Springs
Xalaal Cairns Travel Guide
Tilmaamaha Safarka ee Brisbane Xalaal
Xalaal Safarka Perth
Xalaasha Safarka ee Sydney
Hoyga Star Docklands Apartment Melbourne
Hoteelka Adelphi Melbourne
Hoteelka Adina Apartment Hotel Melbourne
Hoteelka Adina Apartment ee Melbourne, Wadada Flinders
Hoteelka Adina Apartment ee Melbourne, Northbank
Hoteelka Apina Apina, South Yarra
Hoteelka Adina Apartment, St Kilda
Albert Heights Adeegyada Guryaha ee Melbourne
Guryaha Adeegyada ee Albert Road Melbourne
Guryaha Aluxstay Bell City Preston
Guryaha Ink St. Kilda
Guryaha Koonfurta Yarra Melbourne
Guryo Ku Yaala Lygon Melbourne
Guryaha Armadale ee Adeegga ah Melbourne
Arrow On Swanston Guryaha La Adeegsaday Melbourne
Taxanaha Farshaxanka Blackman Hotel Melbourne
Taxanaha Farshaxanka Cullen Hotel Melbourne
Taxanaha Farshaxanka Olsen Hotel Melbourne
Guryaha Aston Acland St Melbourne
Auberge Woodend Sariirta Raaxada & Guryaha Quraacda
Guryaha Barkly Melbourne
Saldhigga hostel ee St St. Kilda
Beau Monde Hotel International Melbourne
Xarunta Galbeedka Madaarka & Xarunta Shirarka ee Melbourne
Guryaha Ugu Wanaagsan Galbeedka Galbeedka Alexander Alexander & Guryaha Melbourne
Ugu Wanaagsan Galbeedka Fawkner Airport Motor Inn & Adeeg Gaar ah
Best Galbeedka Frankston International Motel
Best Galbeedka Mahoneys Motor Inn Melbourne
Ugu Wanaagsan Western Plus Buckingham International Hotel Melbourne
Ugu Fiican Western Plus The Tudor Box Hill Hotel
Hoteelka ugu wanaagsan Western Premier Hotel 115 Kew
Guryaha ugu Wanaagsan Galbeed Webi Melbourne
Xeebta Galbeed Sandown Heritage Motel Melbourne
Best Werribee Park Motor Inn
Big 4 Melbourne Ashley Gardens Village Holiday
Guryaha Birches Adeegyada Melbourne
Hoteelka BreakFree Heritage ee Little Bourke Melbourne
Guryaha Deganaanshaha Carlton Melbourne
Guryaha Caroline loo Adeegsaday Brighton
Guryaha Caroline Loo Adeegsaday Melbourne
Qasriyada Waverley Sariirta & Quraacda Essendon
Causeway Inn On Mall Melbourne
Hotelka Charsfield Boutique Melbourne
Guryaha Cagaaran ee Chevron Green Melbourne
Citadines oo ku taal Bourke Melbourne
Hoteelka CitiClub Melbourne
Kaga tag Melbourne
Magaalada Edge On Elizabeth Apartments Melbourne
City Edge Adeegyada Guryaha ee Bariga Melbourne
Hotelka City Garden Melbourne
Xadka City Hotel Melbourne
Hotelka City Park Melbourne
City Tempo Guryaha Joogitaanka Gaaban Melbourne
Guryaha Martida ee Claremont
Clarion Suites Gateway Melbourne Hotel
Raaxada Inn & Suites Essendon
Raaxada Inn & Suites Werribee
Raaxada Inn Lygon Lodge Carlton
Raaxada Inn Ringwood Lake Melbourne
Hotel Cosmopolitan Boutique Melbourne
Hoteelka Croen Promenade Hotel Melbourne
Daargada Dareenka On Collins
Meelaha Docklands Prestige Apartments Melbourne
Uruurinta guryaha gaarka loo leeyahay ee Docklands
Guryaha Bariga Magaalada Guryaha Loo Adeegsaday Melbourne
Guryaha Easystay Ee Raglan Street Melbourne
Guryaha Easystay Melbourne
Formule 1 Hoteel Fawkner
Frankston B&B Guesthouse Melbourne
Degaanka Grand Harbor Melbourne
Uruurinta Grand Hotel Melbourne MGallery
Grand Mercure Melbourne Accor Fasaxyada Naadiyada
Guryaha Habitat Melbourne
Hoyo Maalmo Farxad leh Tinamba
Guryaha Hawthorn Gardens ee Adeegyada
Guryaha Hiigh Melbourne
Hoteelka Hilton Melbourne South Wharf
Hoteelka Barkly Melbourne
Hoteelka Causeway Melbourne
Hoteelka Formule 1 Dandenong
Hoteelka Sophia Melbourne
Hababka Ibis ee Kinggate Hotel
Hotelka InterContinental Melbourne Rialto
Guryaha Knightsbridge Melbourne
Lamplighter Motel & Guryaha Oakleigh
Hoteelka Mansion & Spa ee Werribee Park
Bandhigga Mantra 100 ee Melbourne
Hoteelka Mantra On Jolimont East Melbourne
Mantra On Park Apartment ee Melbourne
Guryaha Mantra Southbank Melbourne
Beerta Fasaxa ee Melbourne Big4
Hoteelka Melbourne Parkview
Guryaha Joogitaanka Gaaban ee Melbourne
Meelaha Gaaban ee Melbourne MP Deluxe
Guryaha Gaagaaban ee Melbourne On Whiteman
Melbourne joogitaan Gaaban ee Southbankone
Guryaha Istuudiyaha ee Melbourne
Beerta Albert Mercure Melbourne
Wadada Mint Hotel Melbourne St Kilda
Dadka Reer Guuraaga ah All Backpackers Melbourne
Warshadaha Reer Guuraaga Melbourne
Guryaha Waqooyiga Haven Melbourne
North Haven oo ku taal Sariirta Badda & Quraacda Melbourne
Guryaha Adeegyada ee Waqooyiga Melbourne
Hoteelka Novotel Melbourne Glen Waverley
Novotel Melbourne On Hotel Collins
Hoteelka Novotel Melbourne St Kilda
Oaks On Suuqa Melbourne Hotel
Aqallada Kormeerka Korjoogtada Mt Dandenong
Hotel Ovolo Melbourne
Guryaha La Adeegsaday ee Paramount
Park Squire Motor Inn & Guryaha La Adeegsaday Melbourne
PARKROYAL Airport Melbourne
Pegasus Apartment Hotel Melbourne
Guryaha Punthill Williamstown
Guryaha Punthill Burwood Melbourne
Punthill Essendon Grand Apartments Melbourne
Guryaha Lane Punthill Flinders Lane Melbourne
Guryaha Punthill Knox
Guryaha Punthill Little Bourke Melbourne
Guryaha Punthill Manhattan Melbourne
Guryaha Punthill Oakleigh
Punthill South Yarra - Davis Avenue Melbourne
Tayada Hotel Batman ee Hill On Collins Melbourne
Tayada Hoteelka Tayada ee Magaalada Lygon Melbourne
Tayada Hotel Manor Mitcham
Madaarka Tayada ee Madaarka Melbourne
Tayada Inn Baton Rouge Melbourne
Tayada Inn Toorak Manor Melbourne
Tayada Tayada D Hotel 'Hotel'
Guryaha Quest Cheltenham
Quest Brighton oo ku taal Bay
Quest Carlton On Finlay Melbourne Hotel
Quest Clocktower oo ku taal Lygon Hotel Melbourne
Guryaha Adeegyada ee Quest Gordon Melbourne
Quest On Chapel Guryaha La Adeegto Melbourne
Quest On Doncaster Wadada Melbourne Apartment
Quest On Lonsdale Adeegyada Guryaha Melbourne
Quest On St Kilda Road Adeegga Guryaha ee Melbourne
Quest Royal Gardens Adeegyada Guryaha Melbourne
Quest SXY Guryaha La Adeegto South Yarra
Quest Williamstown North Adeegyada Guryaha
Guryaha Quest Windsor Melbourne
Guryaha Redan Melbourne
Hoteelka Richmond Hill Melbourne
Robinsons Gudaha Magaalada Melbourne
Rydges Waqooyiga Melbourne
Rydges On Swanston Melbourne Hotel
Sandown Regency & Guryaha La Adeegsaday Melbourne
Xilliyo Botanic Gardens Melbourne
Xilliyadaha Dhaxalka guryaha Melbourne
Lixdan Labaad Guryaha Cawl ee Melbourne
Hurdo & Go Miisaaniyadda Preston
Hurdo & Go Hotel Preston
Sofitel Melbourne On Hotel Collins
Hoteelka Stamford Plaza Melbourne
Hoteelka Brighton Savoy
Guryaha Caalamiga ah ee Adeegga ee Buckingham Melbourne
Hotelka Como Melbourne - MGallery Collection
Hoteelka Windsor Melbourne
Hoteelka Langham ee Melbourne
Hotelka Lyall & Spa Melbourne
Guryaha Stanton Melbourne
Hotel Swanston Grand Mercure Melbourne
Hotelka Victoria Hotel ee Melbourne An All Seasons Hotel
Safarka Inn Melbourne
Huteelka Travelodge Docklands Melbourne
Hoteelka Travelodge Southbank Melbourne
Hotelka Vibe Savoy Melbourne
Qolalka Zara ee Koonfurta Melbourne
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Australia > Safarka Xalaal ee Melbourne
Afar Qodob oo uu qoray Sheraton Mississauga Meadowvale	  
Tilmaamaha Safarka Beytlaxam Xalaal